Imithetho yokunyamekelwa kweenwele ezimhlophe
Ubuhle ngumkhosi onzima. Kungakhathaliseki ukuba banqanda kangakanani i-blondes, bebuza ubuchule babo beengqondo, kungakhathaliseki ukuba kunzima kangakanani indlela kunye nokunyamekela kwenyameko efunyenweyo, abaninzi abafazi baqhubeka befuna ukujoyina iilwanyana ezinobumba.
Abasetyhini abaninzi banokuziqhayisa ngeemfoloko zendalo. Kodwa, nokuba neenwele ezikhanyayo ezivela kwendalo, kunomnqweno wokutshintsha umthunzi weenwele ngokuhambelana nemifashiselo yefashoni. Xa kucaciswa ngamathoni amaninzi, iilisi zeqela elimhlophe ziyasetyenziswa. Ukufezekisa iqondo eliphezulu lokucacisa, sebenzisa ukulungelelanisa okukodwa okuvumela ukuba iinwele zidibanise kumbala omhlophe. Njengomphumo wempembelelo yamacandelo eekhemikhali, ngaphandle kokuguquka kombala akunakwenzeka, uninzi lweenguqu lwenzeka kwisakhiwo seenwele. Ziba ziqhwaba, izikali zezinwele ezibhubhisayo, azivumelani ngokumelana komnye nomnye, ngenxa yezinto ezikhanyayo zilahlekile, iinwele ziba zome, ziqhekeke, zihlukane kwiziphelo. Ukuba imeko yeenwele ayinakuchukumisa impembelelo yombala onobugcisa, kukho imithetho ethile yokunyamekelwa kweenwele ezimhlophe, ezifuneka zigcinwe rhoqo.
Ukuqala ukunakekelwa kweenwele kuyimfuneko phambi kombala. Apha, njengonyango, kungcono ukunqanda imiphumo kunokuba ulwe kamva. Iimakethe zokulungiselela izimonyo zinika iingubo kunye neepatile eziqhubekayo, kunye ne-ammonia kunye ngaphandle, ukuhlawula i-shampoos. Ukuba udinga ukulungisa umbala, gweba upende uze ukhethe okukhethwa kukho kwi-shampoos okanye idayi zendalo (umhluzi we-chamomile, ijusi ye-lemon). Kwiimeko ezigqithiseleyo, sebenzisa i-bezammiachnuyu ngopende, evumela ukunyusa iinwele nge-1-2 tones. Ukuba uthe wagqiba ekubeni utshintshise i-suit kwi-brunette ukuya kwi-blonde, yenze kuphela kwi-salon kunye nokuthatha inxaxheba kumphathi wezakhono. Ukuzihlaziya kweenwele ngaphezu kweetoni ezi-3 kunokuba nemiphumo emibi. Ngaphantsi kweemeko ziyakwenza ukukhwela kunye nokukhanyisa ngexesha.
Khetha uluhlu lweemveliso zokunakekelwa kweenwele ezimhlophe. Kuya kuthatha i-shampoo, i-balm-conditioner, i-mask eyondla, ioli yeenwele. Imigaqo yokusetyenziswa nganye kwemveliso iboniswa kwiipakethe, zikhanya, azidingi ixesha. Ubuninzi beibhalom kunye neemaski kunconywa ukuba zihlale zizinwele ngaphezu kwemizuzu engama-2-5. Ukugqithisa ixesha elichaziweyo kwimimiselo akufaneleki. Izinwele ziyakunzima, kuya kuba nzima ukulingana.
I-mask kunye ne-balm iyacetyiswa ukuba isebenzise kwiinwele ezinamanci. Kuthethwa ukuba iinwele emva kokuhlamba kufuneka zihlanjwe ngelawula, zisuse umswakama obuninzi, kwaye zize zisebenzise loo mveliso. Izinwele ezicacileyo, kwaye, ngokukodwa, zichazwe, zivame ukuba zomile ekupheleni, njengoko zibonakaliswe ngokuphindaphindiweyo kwipende, xa izimpande zigqithisiweyo. Kule meko, sebenzisa imaski kunye ne-balm kule nxalenye yeenwele eziyifunayo. Ngaphandle koko, iinwele kwiingcambu ziya kuqala ukucoca ngokukhawuleza, kwaye intloko iya kuhlamba rhoqo.
Isebenza kakhulu kwiincinci zokusila. Njalo qhaqhazela iinwele zakho ngeempawu zendalo. Ngenxa yoko, ukujikeleza kwegazi kunye nesondlo sesimo seengcambu kuphucula.
Ungaze uqale ukomisa iinwele zakho emva kokuhlamba. Vumela iinwele ukuba zome ngokwemvelo. Izinwele ezincinci zincinci zibekiwe, kunye nexesha lokutshatyalaliswa komoya oshushu liyancitshiswa. Ukongezelela, iimveliso zokutyikitya, ezisetyenziswe ngqo phambi koyilo, ukongezelela ukunyusa iinwele. Sebenzisa nayiphi na ithuba ukulahla i-dryer hair, i-tongs kunye ne-ironing kwinqanaba leenwele. Ukushisa okuphezulu kusinya iinwele ezisele zalimele.
I-Blondes inomqondo wokuphulaphula imithetho yomntu okhathalela izinwele ezimhlophe. Ukuhlamba iinwele emva kokuhlamba, ungasebenzisa izisombululo ezilula:
2 tbsp. Iipuni zeqoqo ye-chamomile kwi-pharmacy zenziwe, njengoko kubonisiwe kwiphakheji, umhluzi obuncibilikiweyo uphuzwa ngamanzi abilayo ukuya kwi-1 litre;
engeza 1 ilitha yamanzi ½ ijusi lemon.
Kodwa iiresiphi zi-masks ezilula zokunyusa ukunakekelwa kweenwele ezimhlophe:
½ inkomishi ebisiweyo i-milk add 1 egg, udibanise kakuhle kwaye usetyenzise iinwele, udibanise imizuzu eyi-15, uhlambe;
1 i-egg whip, engeza 3 tbsp. iipuni yeoli ye-castor kunye ne-vinegar ye-tsp, faka kwizinwele, gquba intloko ngetayili uze ushiye iyure, emva koko uhlambe intloko nge-shampoo;
ukupheka elitsha kumnquba omncinci wemifino, engeza ½ inkomishi yobisi kunye nepunipoon ye-oyile yemifuno (i-olive oil okanye i-oil castor), sebenzisa kwizinwele malunga nesiqingatha seyure, uze uhlambe iinwele zakho nge-shampoo.
Ingqongileyo nayo inefuthe elibi kwizinwele. Umoya, imisebe yelanga, umoya ongcolileyo we-metropolis ayongezeli ubunwele kwizinwele. Imigaqo yokushiya ngezinye iinkqubo kufuneka ifake iinkqubo zeronon.
Enye yalezi zixhobo eziphambili ekunyamekelweni kweenwele ezimhlophe kukugqithiswa. Le ndlela isebenzisa imithetho ye-physics malunga nokukhangwa kweenxalenye zeentlobo. Izinwele ezithintekayo ezinomtsalane zikhangela inqununu echazwe kakubi ye-cellulose. Ngenxa yoko, iinwele zihlanganiswe nefilimu ephezulu kakhulu ye-cellulose. Eli phephancwadi lijonganisa ubuso beenwele, likhusela kumonakalo, lugcina umswakama wendalo kunye nezondlo, lomeleza umbala weenwele ezinemibala kwaye linikezela ukukhanya kwe-chic. Ukongezelela, ukubunjwa, ukukhupha iinwele nganye, kwandisa ubukhulu bayo. Ngenxa yoko, ukuya kwi-10% kwandisa ubuninzi beentloko. I-Laminate inefuthe elilumkileyo lokunyuka kwamanzi, ngoko ke umzobo uhlala ixesha elide kwaye ugcinwe kakuhle ngomswakama ophezulu. Isiphumo siphelela kwinyanga enye nesiqingatha. Le nkqubo ibiza kakhulu, kodwa ngaphezu kokufanelekileyo ehlobo ngaphambi kokuya elwandle.
Unonophelo olungapheliyo luya kuvumela ukugcina iinwele ezinempilo ixesha elide, ezikwazi ukuhlobisa ibhinqa elingcono kunezinto zokugqoka.
Naluphi na into ofuna ukuyazi malunga neenwele?
Ikhalenda yeLunar yeenwele zokukhwela i-July 2017 - iintsuku ezilungileyo kunye ezingenakulungeleka ukutsala kunye nokusika iinwele, kunye nezikhonkwane
I-henna engenakubala kunye nobuhle beenwele
Imihla yeenwele kunye ne-gelatin
Ukunyamekelwa kweenwele emva kokubeletha
I-Gelatin mask yokubamba iinwele ekhaya
Kate Middleton. Ukunikela kwesandla nentliziyo
Isobho seembotyi i-Dal Tarkari
Indlela yokukhetha ukwenziwa kwengubo yokuhlwa
Ukutya okubalulekileyo kwesibindi
Ukuyila igumbi lezingane kwintombazana
Ubudlelwane phakathi kwendoda kunye nentombazana: ixesha elinzima
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngeveki ekhaya
Ukufumana esiswini kwisithuba sokugqibela sokukhulelwa
Isobho seTatato kunye nenkukhu